Ciidamada Jeneraal saadaq joon oo isku fidiyay Degmada Hodon iyo goobo hor leh. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ciidamada Jeneraal saadaq joon oo isku fidiyay Degmada Hodon iyo goobo...
Ciidamada Jeneraal saadaq joon oo isku fidiyay Degmada Hodon iyo goobo hor leh.
Wararka ka imaanaya saakay magaalada Muqdisho, ayaa sheegaya in Ciidamo daacad u ah Taliyihii hore ee Booliiska Gobolka Banaadir Gen. Saadaq Cumar Xasan (Saadaq Joon) ay xalay ilaa saakay aroor hore fariisimo ka samaysteen xaafado ka tirsan Muqdisho.
Ciidamadan oo ku gaashaaman hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka dagaalka, ayaa fariisimo ciidan ka samaystay xaafadaha Black sea, meel aan ka fogayn isgoyska albaraka iyo Shiirkole oo ka tirsan degmada Hodon.
Previous articleMadaxweyne Cali Guudlaawe oo aad uga carooday Dilkii Korneyl Yaasiin Cabdi Tooxow oo shalay lagu dilay.
Next articleMaleeshiyaadka Liibiya oo Xabad joojin gaaray iyo Golaha ammaanka oo taageeray
Amiir William-ka qoyska Boqortooyada UK ayaa BBC-da ku eedeeyay inay ku guul darreysatay wareysigii ay la yeelatay hooyadii kaas oo uga sii daray xaaladdeeda...
Turkiga oo Canbaarayn kala dul dhacay Mar kale Qaraxii shalay...
Guddoomiyaha Aqalksa Sare Cabdi Xaashi oo ka soo hor jeestay ka...